Akụkọ - Ụgwọ Mbupu & Ụgbọ njem na -abawanye, ikike ibu, na ụkọ akpa ụgbọ mmiri
Ụgwọ Mbupu & Ego na -abawanye, ikike ibu, na ụkọ akpa ụgbọ mmiri
Igbu mbupu na mbupu
Site na igbu oge na mmechi metụtara ọrịa na-aga n'ihu, arịrịọ na-akwụsịghị maka ibu ụgbọ mmiri si Eshia gaa US, na enweghị ikike, ọnụego oke osimiri ka na-adị elu nke ukwuu na oge njem na-agbanwe agbanwe.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ebu ụgbọ elu na-agbakwụnye ikike dị oke mkpa, gụnyere n'okporo ụzọ Asia-Europe. Mana ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a ga -ebute naanị mbubata ụgbọ ala, na -enweghịkwa ụgbọ mmiri echekwara, mgbakwunye ndị a nwere ike ịbịa n'ike n'ike n'okporo ụzọ ndị ọzọ.
Ọnụ ego ụgbọ elu na -adịkwa elu ka ndị na -ebubata na ndị na -ebubata ya na -achọ ụzọ ọzọ maka ibu ụgbọ mmiri - n'agbanyeghị mmefu na mfu ego enwere ike - dị ka ụzọ na -ekwe nkwa nkwakọ ngwaahịa na iwulite iguzosi ike n'ihe ndị ahịa ebe enwere ike ree ndị asọmpi ha n'ihi igbu oge ngwa agha.
Ndị na -ebubata ngwaahịa na ndị na -ebubata ya na -agbasi mbọ ike ị nweta ikike, tinye ngwongwo ha n'ụgbọ, ma nyefee ha. Site na ndapụta site na ntiwapụ na nso nso a na Yantian na mmetụta na -aga n'ihu site na mkpọchi Suez, nsogbu ndị a abawanyela.
Ọnụ ụgbọ mmiri oke osimiri na -abawanye ma na -egbu oge
Ọdụ ụgbọ mmiri nke Yantian-nke ruru ihe dịka 25% nke oke US, oke oke osimiri China sitere-na-arụ ọrụ n'ike n'ike n'izu ole na ole gara aga mgbe ntiwapụ nke Coronavirus gasịrị. Mgbe arụ ọrụ na -amalite ịmalite, ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị nso na -ejupụta ebe ha na -agbasi mbọ ike ibute ume na Yantian. Ndalata nwere ike imetụta mbupu oke osimiri karịa mkpọchi Suez.
Eleghị anya ọ gaghị enwe nnukwu mgbanwe site na Eshia ruo US tupu oge oke amalite na July. Ndị na -ere ahịa na -agbasi mbọ ike iweghachi ngwa ahịa ma na -achọkwa ihe achọrọ, mana na igbu oge na mmechi, ọ na -esiri ike ijigide ya.
Ndị ọzọ na-ebubata mbubata na-etinye iwu oge kacha elu n'oge iji zere ịbụ onye ejidere na-enweghị ụlọ akwụkwọ na ngwa ahịa oge ndị ọzọ. Ọchịchọ a na -aga n'ihu na -atụgharị ọnụ ahịa ụgbọ elu na -arịgo n'ọtụtụ ụzọ, ebe ụfọdụ ndị na -ebu ụgbọ mmiri na -ewebata ọnụego mbubata mbụ na ọnụ ahịa dị elu.
Ọnụ ahịa Asia-US West Coast belatara 6% ruo $ 6,533/FEU, mana ọnụego ka dị 151% karịa otu oge n'afọ gara aga.
Ọnụ ahịa Asia-US East Coast rutere $ 10,340/FEU, mmụba 209% ma e jiri ya tụnyere ọnụego izu a n'afọ gara aga.
Ọnụ ahịa Asia-North Europe na North Europe-US East Coast ọnụego mụbara 6% n'otu n'otu ruo $ 11,913/FEU na $ 5,989/FEU. Ọnụ ego Asia-North Europe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 600% dị ọnụ karịa ka ọ dị n'oge a n'afọ gara aga.
Ọchịchọ ndị ahịa dị elu na ọkwa ngwaahịa na-adabaghị adaba na-atụ aro ka ha ghara ịda mbà n'oge na-adịghị anya, na-atụ anya ịrịọ ọzọ site na oge oke oke osimiri kwa afọ n'ọnwa a.
Ụgbọ njem ụgbọ elu na -egbu oge yana ọnụ ahịa na -abawanye
Ụgbọ mmiri dị oke ọnụ na nke a na -apụghị ịdabere na ya na -akpali ndị na -ebubata ụgbọ ibu ibu, mana ọchịchọ a na -emetụta ọnụ ahịa yana ịbawanye ọnụ ahịa ngwaahịa.
Ọchịchọ ndị ahịa dị elu emeela ka ibu ụgbọ elu ụwa laghachi na ọkwa pre-COVID, yana data ahịa ahịa Freightos.com na-egosi ọnụego Asia-US na-arị elu ihe dịka 25% n'ọtụtụ ebe na Eprel wee na-ebuli elu ruo Mee.
Ọ bụ ezie na ọnụego gbadara ihe dịka 5% n'izu gara aga n'okporo ụzọ Eshia na US, ọnụ ahịa ka dị okpukpu atọ karịa nke afọ.
Atụmanya bụ na oge ibu ụgbọ elu, nke na -abụkarị n'ọnwa Ọktoba na Nọvemba, nwere ike bido n'ọnwa Septemba ebe ndị mbubata ga -agba mbọ hụ na ngwa ahịa ezumike abịarute n'oge.
Na mgbakwunye, ntiwapụ COVID-19 kpaliri ndị isi sitere na mmalite ịmanye mkpọchi mpaghara. Nke a na -emetụta mmepụta ụlọ ọrụ na mpịakọta na -asọga n'ọdụ ụgbọ elu. Ọnọdụ ndị a siri ike ga -eme ka ọnụego dị elu ruo oge ụfọdụ.
Nkwụsị ụgbọ ala na -abawanye
N'ịchọ nnukwu ihe n'aka ndị na -azụ ahịa, ndị na -ebubata ngwaahịa na -eme ngwa ngwa imezigharị ngwa ahịa, na -eme ka ikike ịkwọ ụgbọ ala sie ike na ịrị elu.
Ugbu a ọtụtụ ndị na -ekiri ihe na -adọ aka na ntị na iwu ichepụ iche maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na -alọta nwere ike ibute nnukwu oge ọbụlagodi na ngwongwo arụpụtara n'oge ezumike dị njikere ibubata.
Nke a nwere ike bụrụ ikpe ruo ọkara mbụ nke 2021.
Kedu mgbe ọnụego ibu na ọnụ ahịa mbupu ga -agbada?
N'ọnọdụ dị ugbu a, ọtụtụ ndị na -ebubata ngwaahịa na ndị na -ebubata ya na -eche mgbe ha nwere ike ịtụ anya na ọnụego ibu na ọnụ ahịa mbupu ga -agbada. Azịza ya? Ọbụbeghị.
Mana, n'agbanyeghị na enwere ike igbu oge na oke mbupu ụgbọ mmiri, enwere usoro ole na ole ndị mbubata nwere ike were ugbu a:
Otu esi agagharị n'ahịa ibu ugbu a:
Tụlee opekata mpe ọnụego na ụdịdị ka ijide n'aka na ị na -enweta ọnụ ahịa kacha mma yana ọrụ kacha arụ ọrụ.
Chekwaa mmefu ego gị na oge njem maka mgbanwe. Ụgwọ n'ihi igbu oge a na -atụghị anya ya ma ọ bụ ikike nwere oke nwere ike ibilite, yabụ jikere.
Nyochaa nhọrọ ụlọ nkwakọba ihe iji belata mmetụta nke belatara ọchịchọ na mgbochi azụmahịa na US.
Lezienụ anya maka uru nke ngwongwo gị ma tụlee ma pivot nwere ike ịba uru. Tụkwasị na nke a, cheta itinye ego n'ego ibu mgbe ị na -atụle uru ị bara.
Kedu ka ndị mbubata obere ma ọ bụ na -ebughi oke ibu nwere ike isi mee atụmatụ maka ịga nke ọma na Freightos.com:
Ghọta na igbu oge na ụgwọ ndị ọzọ nwere ike ibilite. Ndị na -ebugharị ibu na -anwa ike ha niile ịkwaga ngwongwo na nhazi oge na -enweghị ụgwọ ndị ọzọ, mana n'oge a na -akwụghị chịm, igbu oge na ụgwọ ndị ọzọ nwere ike ime site na nchịkwa nke ndị na -ebugharị ya.
Tụlee ụdị mbupu kacha mma maka gị ugbu a. Dị ka n'oge ọrịa na-anaghị efe efe, ibu ụgbọ mmiri na-adị ọnụ ala mana ọ nwere oge ndu dị mkpa. Ọ bụrụ na oge njem gị chọrọ ya, jiri ụgbọ mmiri na -ebuga ya, ị ga -enwe ntụkwasị obi n'oge njem.
Na -ekwurịta okwu mgbe niile na onye na -ebugharị ibu gị. Nke a dị mkpa karịa mgbe ọ bụla - ịnọrọ na kọntaktị pụtara na ị ga -ejikwa aka nke ọma n'oge njem gị ma nọrọ n'elu mgbanwe ọ bụla nwere ike ibilite.
Jide n'aka na ị nwere ikike ịnakwere ngwongwo gị mbata. Nke a ga -ebelata igbu oge.